U-PRIYANKA CHOPRA KUNYE NO-NICK JONAS BASEMTHETHWENI KWIHONEYMOON YABO: JONGA IIFOTO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato U-Priyanka Chopra kunye no-Nick Jonas basemthethweni kwiHoneymoon yabo: Jonga iifoto
U-Priyanka Chopra kunye no-Nick Jonas basemthethweni kwiHoneymoon yabo: Jonga iifoto
Umdlali weqonga wase-India u-Priyanka Chopra, L, kunye nomyeni wakhe imvumi yase-US uNick Jonas, R, ubonwe esenza umfanekiso kumnyhadala wokuphehlelelwa kwe-Bumble's India e-Soho House, e-Juhu e-Mumbai. IBumble yinkqubo entsha yeNethiwekhi yeNtlalo yabasetyhini. (Ifoto ngu-Azhar Khan / Imifanekiso ye-SOPA / i-LightRocket nge-Getty Izithombe)
Ngu: Esther Lee 01/11/2019 kwi-10: 45 AM
UNick Jonas kwaye Priyanka Chopra ukhethe ukulibaziseka kancinci Inyanga elandelayo Ukulandela umtshato wabo kaDisemba-kwaye ixesha lokutshata sele lifikile.
Esi sibini safotwa kule veki sifika kwiCaribbean ngento ekumele ukuba yayibalekile emva kwenyanga yesaqhwithi sosapho, uhambo kunye neminyhadala. NgoLwesihlanu, nge-11 kaJanuwari, uJonas wabelana ngemifanekiso embalwa kwimithombo yeendaba zentlalontle yesibini esonwabela ukubaleka kwabo.
Mnu & Nksk. Jonas
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UNick Jonas (@nickjonas) ngoJan 10, 2019 kwi-3: 46 pm PST
Uthumele into ethile ayithandayo kunye nenkosikazi yakhe, Mnu & Nksk.Jonas kunye nemifanekiso engaphezulu kwi-Instagram Stories yakhe.
Inkwenkwezi yangaphambili yeDisney Channel ikwabelane ngevidiyo kwipropathi apho bahlala khona, kubandakanya ikliphu yomfazi wakhe edlalayo xa ejongene nolwandle olu-teal.
(Ityala: Nick Jonas / Instagram)
Isibini esingalindelekanga sika-2018 sonwabile ukuya minimoon e-Oman kwangoko emva kwemithendeleko yomtshato wabo (amatheko amaninzi, afakiwe) ngaphambi kokuya kwi-heiress u-Isha Ambani kunye no-Anand Piramal weeveki zomtshato ezintle.
Ngelo xesha, uChopra uxelele oonondaba ukuba ebengayitshixanga indawo abaya kuyo emva komtshato.
Andinalwazi [apho siya khona], i Quantico Umdlali weqonga uxelele NDTV . Okwangoku, ndinezibophelelo zomsebenzi kule nyanga iphela ngokudubula kwaye ndenza umsebenzi omninzi kunye neBumble kunye nezinye izibophelelo endinazo. Kwaye andazi. Asikacingi ukuba kuphi. Ndicinga ukuba izothusa kodwa. Ndicinga ukuba yile nto uceba umyeni wam.
Iindawo zomtshato eNew Hampshire
kungekudala sele uza kwenza isindululo
ndingalitshintsha ngokusemthethweni igama lam lokugqibela
Iindawo zomtshato waselwandle eMichigan